Otu n'ime ezigbo breakthroughs nke oge a technology kemgbe biakwa obibia nke dijitalụ media, onyonyo, na vidiyo na-ugbu a mfe iwere, echekwara ma wega n'etiti ngwaọrụ, na akpataworo ihe osise na obere vidiyo iwere karịa mgbe ọ bụla. Ma ihe banyere na ndị agadi footage ị nwere nke gị na ụmụaka, ma ọ bụ n'ezie ihe nkiri nke ị mụrụ gị mere? Teepu otú degrade karịrị oge, ma ị na-adịghị ida ndị dị oké ọnụ ahịa na-echeta, ị nwere ike tọghata ha ka ha dijitalụ faịlụ na nwere otu na mma na-adịgide adịgide nchekwa na gị ẹdude dijitalụ faịlụ-enye gị. Ma ihe na-aka na-8mm teepu dabeere footage n'ime kọmputa gị?
1. Ime njikọ
Akụkụ mbụ nke usoro a bụ n'ezie achọta a ụzọ jikọọ gị 8mm edekọ na kọmputa mere na ọ pụrụ ingest video footage. Nke a na-eji na-nnọọ a convoluted na ike usoro, ma taa ya mere mfe na ọkachamara video kpọọ ngwaọrụ, ha nwere ike ịbụ ma esịtidem kaadị na fir n'ime kọmputa - ọtụtụ dị ka arụmọrụ esịne ke a TV card- ma ọ bụ dị ka onwe ẹdude USB ngwaọrụ ikwunye n'ime ihe ọ bụla USB anya na gị na PC. Kpọmkwem njikọ ahụ ga ịdị iche iche dabere na gị camcorder onwe ya na video kpọọ ngwaọrụ ị na-eji, ndị kasị nkịtị na-eji RCA njikọ, ndị a bụ 3 Gịnị, na-acha odo odo, otu acha uhie uhie na otu na-acha ọcha, ha dakọtara nkwụnye agba na kaadị na na camcorder. The video mgbaàmà na-eji odo njikọ, ebe-acha ọbara ọbara na-acha ọcha na akaụntụ maka onye ọ bụla ọwa nke stereo ọdịyo. Mgbe ụfọdụ ọdịyo na ma ndị kpọọ kaadị ma ọ bụ camcorder ga-eji dị nnọọ a ọkọlọtọ 3.5mm jaak-nkwụnye maka audio, ihe nkwụnye ọkụ nke na-emekarị gụnyere na kpọọ ngwaọrụ.
Ihe ọzọ e ebufe gị etere ka dijitalụ format na kọmputa gị bụ software. Gị kpọọ ngwaọrụ yiri gụnyere ụfọdụ kwesịrị ekwesị software nchịkọta ina ọrụ a mere, Otú ọ dị, e nwere akụ na ụba nke free na azụmahịa software dị na mgbakwunye na-enweta site kpọọ ngwaọrụ emepụta ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe ọzọ ọrụaka ma ọ bụ ọbụna ihe kwụ ọtọ, N'ezie dị iche iche software niile ga-arụ ọrụ ubé dị iche iche, ma ndị bụ isi usoro ga-anọgide otu ihe ahụ.
Na otu ezigbo ụwa, ị ga-achọ idekọ video nọ nnọọ kasị mma kwere omume, Otú ọ dị, e nwere na-efu ndị nnọọ kasị mma, na okwu nke nchekwa, faịlụ site ga-abụ ihe 13GB kwa awa nke footage, na nhazi ike dị mkpa iji na imezu ya nke ọma. Ugbu a, ọtụtụ ndị na-ezuru nchekwa na ngwa ngwa processors ụbọchị ndị a na-adịghị echegbu onwe, ma ọ bụrụ na nke a bụ a nsogbu n'ihi na gị, mgbe ahụ n'ịgbanwe ntọala bụ banyere guzozie ọchịchọ maka àgwà megide practicalities nke faịlụ nha na kọmputa ike. A ezi ikwere bụ iji MPEG-2 mkpakọ nke na-ahapụ gị ike nta faịlụ ma retains kasị nke àgwà, nkezi onyenlereanya ga-enwe ike ịgwa ndị dị iche.
3. Ndekọ Video
Mgbe i guzobere ihe niile elu, mere ka njikọ na na, na ọ bụ nanị otu okwu nke na-amalite na kpọọ software na ndekọ na-esetịpụrụ ndị camcorder ma ọ bụ ndị ọzọ video teepu isi iyi na-egwu.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ kpọmkwem ibe n'ibe nke video naanị, i nwere ike ime nke a nanị site na-teepu mgbe ahụ tupu ị malite ndekọ, ị na-adịghị ka ịdekọ ihe niile ma ọ bụrụ na unu adịghị mkpa ya.
Ozugbo na e mere, ị ga-ugbu a nwere ihe MPEG-2 dijitalụ faịlụ gị video footage. Ị nwere ike guzo na ya ugbu azụ na-enwe mmasị gị amamihe, ma ọ bụ ị pụrụ ịga n'ihu na-eme ihe ole na ole na faịlụ ugbu a ị nwere ya.
4. Archiving na akakabarede
Dị ka anyị kwuru ná mmalite, otu n'ime ihe ndị mere converting teepu ka dijitalụ faịlụ bụ ikike Archive ya na a na-abụghị ihere format maka nchekwa, na n'ihi na ọdịnaya vidiyo, nke a bụ na-emekarị DVD. Anya isi gị ugbu a nwere a ọkọnọ nke ndị MPEG-2 faịlụ nwere ndị Edebewo echeta nke njem nke ndụ, gị nzọụkwụ ọzọ na-eleghị anya aga-agụnye ịnweta ha jidesie DVD maka nchebe Idebe.
Ị pụrụ nanị eji DVD dị ka a data nchekwa na-ajụ ma dị nnọọ ịdọrọ gị faịlụ na na DVD e dere (oge a sistem-eme nke a na-akpaghị aka enweghị ihe ọ bụla mmezi software), ma ọ bụ i nwere ike tọghata faịlụ DVD format otú ha na-egwu kpọmkwem site disk ọ bụla DVD ọkpụkpọ dị ka Wondershare Player.
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ike DVD na ga-arụ ọrụ ọ bụla DVD ọkpụkpọ, ị mkpa ụfọdụ DVD Creation software, o doro anya na ọzọ e nwere a nnukwu ọnụ ọgụgụ ịhọrọ site na ihe niile na-arụ ọrụ dị iche iche ma ubé bụ isi workflow anọgide n'otu. Mbubata ọhụrụ gị MPEG-2 faịlụ n'ime ihe e kere eke software, eme ka ọ bụla mgbanwe nwere ike ị chọrọ, dabere na software ụfọdụ nwere obere ka ọ dịghị edezi ụlọ ọrụ, ndị ọzọ nwere keukwu edezi atụmatụ, na mgbe ahụ ọkụ (ndekọ) ikpeazụ video ka DVD.
Ọ bụ n'ezie n'ụzọ kwụ ọtọ iji hụ na gị 8mm etere nwere ike hụrụ n'enweghị nsogbu na-adị mfe n'ọdịnihu site mbịne ha n'ime dijitalụ faịlụ na-adị mfe na-echekwa n'enweghị nsogbu na-ekenye ezinụlọ na ndị enyi gburugburu ụwa.
> Resource> Video> otú nyefee 8mm Videos ka Computer (PC)